Ma naqaan Akhriyidda?
Gacalle/gacaliso, ma taqaan akhriyidda?, amase ma naqaan akhriyidda?. Laga yaabee in aad istiraahdo, muxuu su’aashaa noo waydiiyay?!. Runtii, kadis iguma ah waydiintiinnu, waana garan karaa in aad akhriyidda ku dheeraysaan oo sadarradanba waad akhriseen waliba afaf badan oo kale in aad akhrisaan waa filayaa. Haddaba, Akhriyid(-da): waa eray ama hadal qoran kicin; ku dhawaaqid; naqid; marin (Eeg qaamuuska af-soomaaliga ee Dr. Yasiin C. Kenadiid dabcaaddii 1976dii).
Akhriyidda aan u jeedo ma aha kicinta xarfaha Laatiinka ah ee af-soomaaliga lagu qoray, sidoo kale, waxa la akhriyo waa fara badan yihiin; faalka waa la akhriyaa, fijaannada (koobabka yar-yar oo qaxwaha lagu cabbo) waa la akhriyaa, calaacasha gacanta midig waa la akhriyaa, intaa iyo in ka badan oo la akhriyo, middoodna dan kama lihi!.
Akhriyidda, aan u muraad lee yahay waa ka mug wayntahay xaaladahaa oo dhan. Nasiib darro, soomaali inteeda badan waa ka dhacsantahay akhriyidda saxa ah ee hadalka qoran. Sidoo kale, waxaa laga yaabaa qaar bulshada ka mid ah maskaxdooda in aysan meel ku lahayn fahamka nuxurka ku jira sadarrada dhexdooda (between the lines). Akhriyidda aan tilmaamayo waa: kartida bulshada soomaaliyeed u lee dahay kicinta, ku dhawaaqidda iyo garashada qoraallada laga diyaariyo dhacdooyinka soomaaliya soo foodsaara, halka ay salka ku hayaan, cidda maslaxaddeeda la ilaalinayo iyo saamaynta qofka saddexaad (The third person) ku lee yahay waxa dhacaya dhexdeenna. Qofka saddexaad (the third person) waxaan ulajeedaa; Bulshada caalamka mid daris nala ah iyo mid naga fog oo madax xanuunka na haysta kor iyo hoos bud-dhige u ah. Qabiilka iyo waxa kale oo aan la yaacnno ma aha halka sartu ka quruntay. Iswaydiinta wax-ku-ool ah waa; kaalin intee le-eg ayay bulashada caalamku ku lee dahay coladda ama nabadda soomaaliya?.
Tusaale ahaan aan u falanqayno war uu qoray webpage-ka (shabakad Internet ah) taariikhdu maalinkay ahayd 24.03.2008: wuxuu qoray:“Marka Kormeer nabadeed waxaa ku tagay Ciidamo Itoobiyaan ah”. (shabakad Internet ah) waxay raacisay: Guddoomiyaha gobolka Sh/hoose wuxuu yiri: “Ciidamada ayaa markii dambe ka baxay gudaha magaalada, iyagoo degay afaafka hore ee laga soo galo magaalada Marka, halkaasoo la sheegay in ay kala socon doonaan dhaqdhaqaaqa magaalada”.
Annagu, ma nihin socoto hadda ka soo istaagtay Trinidad And Tobacco (laatiin Ameerika) oo aan waxba kala socon waxa ka dhacaya soomaaliya. Balse, waxaan nahay dad; laf, lud, maskax iyo dareen soomaali ah oo, biyaha iyo hawada Soomaaliya ku barbaaray, isla markaana fasiri kara wixii laga qoro dhibaha soomaaliy ka aloosano.
Haddaba, warka (shabakad Internet ah) sida uu yahay haddaan u akhrinno, waa sidatan; ciidamo gumaysiga Itoobiya ka tirsan ayaa magaalada Marka ku tagay socod baqdin galin iyo baas-abuur loola jeedo. Ciidamadii gumaysiga Itoobiya dadwaynaha Marka oo muddo nabad ku noolaa waxay galiyeen xaalad sas iyo argagax ku beertay. Ciidamad oo gawaari gaashaaman iyo hub culus magaalada ku dhex maray, muraadkoodi kolkay fushadeen, waxay fariisteen irridda magaalada Marka laga soo galo si ay dhaqdhaqaaqa dadwaynaha u xayiraan.
Gudaha iyo afaafka Marka maxaa kaga lumay ciidamada Itoobiya?!. Nabadda reer Marka yaa xabashi xil ka saaray?. (shabakad Internet ah), maxay ciidamada xabashida ugu tilmaantay, ciidan nabadeed?, uhiillin ciidan cadaw ah halkaa soo ka dhadhami mayso?, Itoobiya soo ma aha dawlad daris ah, (Qof saddexaad) oo duullaan cadaw tinimo fog salka ku haya iyo damac xeebaha soomaaliya u soo duulay?. Bulshada
caalamkuna soo raalli kama ah duullaan qaawan oo dal madax bannaan lagu qabsaday?. Maqaawama (iskacaabin) soo xaq dhabiici ah ma noqon?.
Dhab ahaan akhriyidda saxa ah waxaa la gaari karaa kolkii su’aalahaa jawaabtooda la isku baandhiiyo. Sideedaba, cidina warka inta ka soo shaqayso oo, soo lafa gurto ku soo hordhigi mayso, ee waa in aad lee dahay aqoon yahanno iyo Macaahid istaraateejida ku takhasusay oo maqaallo, diraasado iyo kutub ku soo bandhiga sida saxa ah oo loo akhriyo dhacdootyinka caalamiga iyo kuwa gobolka (Geeska Afrika).Wax akhriyid la’aan waa saldhigga indho xumada naga muuqata!.
Si le-eg bulshada caalaamka iyana waa laga rabaa akhriyidda iyo fahamka colaadaha Geeska Afrika filiqsan. Durduro waa waxa maalin walba Maraykan ku jabo (Durduro geel baa ku jaba) colaadda loo qabana naaxiya. Baryahan waxaa aad loo hadal hayaa “Maamulka Buush” in uu dareemay; madaxda “Addis Ababa” in ay dhiiqo lugaha u galisa, waana sababta UN-ku u soo laba kacleeyay. Dadka aqoonta u leh siyaasadaha Caalamiga ah waxay yiraahdaan; “Maraykanku dhaqaalaha UN-ka inta ugu badan isaga ayaa bixiya, saldhigga UN-kuna waa New York, maantana dunida isaga ayaa ugu itaalroon, sidaa darteed, Golaha Ammaanka wuxuu u soo jeediyay in xassaradda soomaaliya oo looga beensheegay ay hadda af u bixiyaan (xal ka keenaan). Reer Yurub intooda badan waa qabeen dareen ah; duulanka ciidamada xabashidu in uu yahay; dabkii oo saliid hor leh lagu shubayo, ha yeeshee khaadirdhawrid Maraykan iyo ha la idin muto awgeed ayay inta badan dhabarka la jeediyeen, wax isdhaafsina meesha kama marra.
Nimaan, saaxiib nahay ayaa wuxuu iiga sheekeeyay barnaamij su’aalo ah oo uu ka daawaday TV-ga Dubaay. Wuxuu yiri: “habayn habeenada ka mid ah ayaan furay TV-ga, waxaan dhexda ugu dhacay barnaamij gabagaba ah oo ruuxii ku guulaysta la hoyanayo habaynkaa lacag dhan 1.000.000$. Ruuxa wax la waydiinayo, wuxuu xaq uleeyahay; 1- in uu ruux caawiya taleefan u dirsado -2- Ruux madasha fadhiya in uu la tashado -3- In uu codsado su’aasha in 50% laga tuuro. Ninkii su’aalaha la waydiinayay ayaa lagu yiri:”su’aashan waa middii ugu dambaysay, haddaad jawaab sax ah sheegto caawa waxaad la hoyanaysaa hal Milyan oo Doolar”. Su’aal; “afar dal oo muslim ah carabnna ah dalkee ugu hodansan:
Sacuudiga 3- Kuwayt
2- Suudaan 4- Soomaaliya
Tartamihii, durba wuxuu waydiistay in su’aasha 50% la tuuro. Waxaa la sooreebay Sacuudiga iyo Soomaaliya. Wuxuu Taleefan u diray saaxiibki (Urduni ah), saaxiibki wuxuu yiri: “war sacuudiga dheh, Soomaaliya soo tan isdishay oo gaajada looga qaxay ma aha?!”. Tartamihii fursaddii ugu dambaysay ayaa la siiyay oo lagu yiri: “ma ku raacday saaxiibkaa, mase waad ka diidday?”. Tartamihii dhidid waawayn ayaa ka soo yaacay, dadwaynihii neeftay isku cesheen, guddigii garsoorku dhagahay furteen. Aamus dheer dabadeed wuxuu yiri: “Waa ku raacay”. Mar qura ayaa laga dhawaajiyay qalab guux iyo reen isku daray, garsoorkiina ku dhawaaqay: “MAADAN GARAN”.
Nin dhaqaalaha ku xeel dheer oo guddiga ka mid aha ayaa la yiri; “u fasir saaxiibkeen”, wuxuu yiri: “beer, bad, xoolo iyo khayraad dhulka hoostiisa ceegaaga, intaba waxaa laga helaa soomaaliya, hodon tinimada dhabta ahna waa intaa oo la isla helo”. Ninkii odayga ahaa aqoon yari wuxuu ku waayay 1.000.000$, annaga soomaali ahna garasho la’aan iyo aqool xumi waxaan ku waynay; nolol barwaaqo iyo baraare salka ku haysa.
Sheekadaa markaan maqlay waxbaa; “qub iyirri”, adiguse kolkaad akhrisay, dhulku ma kula wareegay, mana jiriiricootay?!. Ugu yaraan hadda ma garatay waxa naloogu meeraysto, colaadda iyo qaxana naloo baday?, Walaal (Akhii),bal, sadarradaa maskaxda ku garoori, haddayba kuu dhaqantahay?!, dabadeed wax uun talo ah sheeg..
Gabagabo: inkastoo nasiib darrooyinka ay ka mid tahay; Muqdishow maanta ragga ku sugan (qaar) far-soomaaliga akhriyaan, af-xabashigana ku hadlla. Waxaan raggaa u fasaxay taliyahooda-baas;(Gabre) oo ay safka dheer har iyo habayn ugu jiraan, kolkay fursad u soo meerto -been fara badan waa sidaane, (Dhagba war ku qaad)- in ay sadarrada soo socda u akhrinyaan; waxaad ku tiraahdaan: “Soomaalidu way kuu maahmaahday oo waxay tiri;“Karkarre kulusaadi halaal ayaa istaawiyee”. Karkarre=Doofaar, Kulusaadi=cayilay; naaxay, halaal(xalaal)=Sharreecada Islaamku aysan reebin cunid iyo isticmaal toona, Istaawin=isumalayn; (Doofaar cayilay xalaa ayuu isumaleeyaa) oo ah; (Xabashi lacag iyo saanad Maraykan soo siiyay wuxuu isumaleeyaa soomaali in uu gumayn karo).
waxaad kaloo ku tiraahdaan; soomaali shirib ayay kuu soo tirisay oo, waxay tiri:
Ciidan Xabashi col ka liita
Kuma carraabin ciid korkeed!.
Cadaado muggaan ka cayrinay
Coomaad ka cirbodhiibsadaan!...
Jananka, sadarradaa ugu celceliya,
haddaad karti uleedihiin.
Hadduu wax ku garan waayo,
farha ka qaada.
Ogaada; idinna meeshuu maro ayaa la idin jiirsiin..
“Qoriyo qiiqiisa waa la isla tuuraa”.
 Nin oday ah oo la oran jiray Shiikh Cabdisalaam Aw Maxamuud (AUN) oo rumaysan faal wuxuu sheegay, xataa haddi la arko in ay been yihiin, sidiisana dambi yahay, ayaa dul istaagay mid faaliye ah oo dad badan oo ku xoonsan faal u akhrinaya oo leh: faalku wuxuu yiri; “saas iyo saas”. Cabbaar kolkuu dul taagnaa ayuu faliyihii ku yiri: “bal maandhoow farahaaga itus”. Kolkuu gacantii uu ku faalinayay u taagay ayuu Shiikhii inta faaliyaha farihiisi rogrogay yiri “Allah waa ruux farihiisu wax u sheegaan!”. Dadkii madaxa ruxayay, inta aad u qosleen ay faaliyihii bartii ka dareereen isaga oo kaligi ah.
 Cadaado waa dagmo ka tirsan gobolka Galgaduud. Coomaad waa dagaan ka mid ah Gobolka Hiiraan. Cirbadhiibsi waa faraha lugaha oo la isku taago, si meel fog waxa maraya loo arko. Waa dabeecadda giiryaalaha (fulayga). Waa (phenomena) xaalad lagu yaqaan ciidamada xabashadi kolkii muqaawamadu (iskacaabinta) baacsato.